Ifakwe kwisixeko sakudala esinentendelezo yabucala, indlu yelog yemveli yeBai
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguYaya
Isilingi yokhuni kunye nodonga lwezitena ezimhlophe zenza izintlu zifudumale kwaye zibe nesitayile. Ngomnyango weglasi ovulekileyo nocacileyo, uhambahamba kwindlela yamatye ujonge izityalo eziluhlaza ezitsala amehlo, kufana nokuba separadesi. Ukuhlala kwi-sofa yelaphu elingwevu, uvula isibane setafile emhlophe kwelinye icala, ufunda ngokuzolileyo phantsi kokukhanya okuthambileyo, kukhululekile kakhulu. Ebusuku, elele phantsi kwibhedi ephindwe kabini enemibala eyahlukileyo kunye nengubo epholileyo, elala ngolonwabo. Igadi ekhethekileyo kunye ne-foyer iyamangalisa ngakumbi, inezityalo eziluhlaza kuyo yonke indawo, ekuhleni kwaye eqaqambileyo. Kuya kuba lula ukuhlala kwikhaya elilula nelifanelekileyo ngexesha lohambo ~
Isilingi yokhuni kunye nodonga lwezitena ezimhlophe zenza izintlu zifudumale kwaye zibe nesitayile. Ngomnyango weglasi ovulekileyo nocacileyo, uhambahamba kwindlela yamatye ujonge izityalo eziluhlaza ezitsala amehlo, kufana nokuba separadesi. Ukuhlala kwi-sofa yelaphu elingwevu, uvula isibane setafile emhlophe kwelinye icala, ufunda ngokuzolileyo phantsi kokukhanya okuthambileyo, kukhululekile kakhulu. Ebusuku, elele…
“Molo, "Anzhu" yintendelezo yesiqhelo yaseBai, ebekwe kwindawo yokuhlala kwisixeko sakudala. Ineendawo zokuhlala ezigqibeleleyo. I-bougainvillea iqhakaza unyaka wonke. Intendelezo izolile kwaye ikhululekile. Ijongeka ngathi yeyona ndawo ifanelekileyo. ekhaya. Indawo igqwesile, kulula kakhulu ukuya eCangshan nase-Erhai Gardens ~”
“Molo, "Anzhu" yintendelezo yesiqhelo yaseBai, ebekwe kwindawo yokuhlala kwisixeko sakudala. Ineendawo zokuhlala ezigqibeleleyo. I-bougainvillea iqhak…
- Yaya, umbuki zindwendwe wakho
Ibhalkhoni, Ibhedi elala abantu ababini, I-Day bed, I-King bed, Izinto ezifakwa efestileni zokwenza indlu ibe mnyama, Umatrasi oyi-pillow-top
Ifakwe kwindawo yokuhlala yesixeko sakudala, kufutshane neRenmin Road, iimitha ezingama-50 kude neYeyu Road, kukho ukutya okuninzi okumnandi, iikhefi kunye neeresityu, okwenza uhambo lwakho lube lula kwaye lube lula...
Umgama ukusuka eDali Airport
imizuzu eyi-51 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Yaya
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dali